आज एकैदिन ८२३ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किए Canada Nepal
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाभाइरस संक्रमित ८२३ जना निको भएर घर फर्किएका जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ८२३ जना कोरोनाभाइरस मुक्त भएर घर फर्किएको जानकारी दिएका हुन् । योसँगै कोरोनाभाइरसबाट मुक्त भइ डिस्चार्ज हुनेको संख्या ६१४३ पुगेको छ ।
प्रवक्ता डा. गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ७४० जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए । यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संक्रमित संख्या हो । यसअघि गत असार ४ गते एकै दिन सर्वाधिक ६७१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।
हालसम्म नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या १५ हजार दुई सय ५९ पुगेको छ भने कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२ रहेको छ ।
आषाढ १९, २०७७ शुक्रवार ११:१०:०० बजे : प्रकाशित